Uma baahnid inaad weydiiso qof walba, tani waxay noqon doontaa mid shaqaale badan oo qaali ah. Shirkadaha cilmi baarista suuqyada waxay ka shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa kalsooni heer sare ah, qalad yar oo qalad ah iyadoo la gaarayo tirada ugu yar ee dadka qaata ee lagama maarmaanka u ah. Tan waxaa loo yaqaanaa taada cabirka saamiga. Adiga muunad qaadista boqolkiiba qaar ka mid ah tirada guud ee dadweynaha si loo gaaro natiijo bixisa heer kalsooni si loo ansaxiyo natiijooyinka. Adoo adeegsanaya qaaciido si weyn loo aqbalay, waxaad go'aamin kartaa ansax cabirka saamiga taasi waxay matali doontaa dadweynaha guud ahaan.
Haddii aad tan ku aqrinaysid RSS ama emayl, guji bogga si aad u adeegsato qalabka:
e = Xadgudubka Khaladaadka. Mar kasta oo aad shaybaariso dad, waxaa jiri doona farqi khalad ah oo ka jira natiijooyinka.